7 फ्री कुराहरु टोक्यो मा गर्न को लागि | सडकको लागि एक युगल
मार्च 15, 2017 /4टिप्पणिहरु
टोक्यो एक सांस्कृतिक बहादुर हो, जापानको कुनैपनि शहरको विपरीत, संसारमा मात्र चल्ने। यसको अनियमित र प्रायः अनौठो अनुहारको लागि ज्ञात छ, त्यहाँ एक धनी, सुन्दर परिदृश्य हो के कुराहरू जापानको राजधानी शहरमा।
संग्रहालयहरु, पार्कहरु, दृष्टि देखि मोटाई उच्च र निश्चित रूप देखि भोजन देखि देख रहे हो, टोक्यो कुनै पनि को लागी केहि अद्वितीय अनुभव को लागी केहि अनुभव को खोज गर्दछ।
जापानको सम्राटको निवास, द शाही पैलेस धेरै पूर्व-अवस्थित महलहरूको साइट हो जुन धेरै जापानी जापानी इतिहासमा फैलिएको छ। तथापि, यो सुन्दर, सुन्दर इलाका मात्र साम्राज्य र रियल्टीको लागि होइन - यो पर्यटकहरूको लागि पनि राम्रो छ।
ती चीजहरूमा जुन साम्राज्य महलमा गर्न सक्दछ, ईस्ट गार्डनलाई घुमाउन समावेश गर्दछ जुन एडो कैसल को घेरिएको छ र धेरै प्रशासनिक भवनहरु पनि छन्। अन्य महान, नि: शुल्क दृश्य-हेर्नका अवसरहरू चिदोरगफुच्टी मोट, जो पैलेस घेरिएको छ, साथै किरणोमू पार्क - एक साइटमा प्रकृति र पार्कको सुन्दर सुन्दर दृश्यहरू भरिएका हुन्छन्।
समयमा समय बिताउनुहोस् Matsuri
Matsuri बस जापानी मा "त्योहार" को अर्थ छ, र जापानी वास्तव मा धेरै उत्सव हो। टोकियोको केही क्षेत्रमा प्रायः हरेक हप्तामा प्रसिद्ध छ Gion Matsuri जुलाईमा निरन्तर सप्ताहांतमा कांडा, एक मई फेवास्ता जुन कुदा माइजोइन तीर्थ शहर भरमा पर्दछ।
यी त्यस्ता त्यस्ता त्यस्ता पर्वहरू फोटो बफ र इतिहास र संस्कृति प्रेमीहरूको लागि पूर्ण आँखा-केडीई हुन्, किनभने तिनीहरू प्रायः प्राध्यात्मक, ऐतिहासिक जापानी भाषाको दृश्य चित्रण र सम्मान गर्छन्।
सेन्सोजी (सेन्सो-जि) भ्रमण गर्नुहोस्
सेन्सोजी टोक्योका लगभग 1,500 वर्षीय मंदिर र जापानको सबै भन्दा प्रसिद्ध बौद्ध स्थलहरु मध्ये एक हो।
628 मा पूरा भयो, Sensoji यस स्टाइलिश भिस्ता, प्रचलित फोटोग्राफिक अवसरों र मंदिर मैदान को कारण पर्यटकहरु को लागि एक लोकप्रिय साइट हो, जो खरीदारी र महान, मूल जापानी खाद्य बजारहरु को लागि एक प्रमुख साइट हो। यसबाहेक, सेन्सोजीजी संज मत्स्युरीको साइट हो, अर्को लोकप्रिय उत्सव हो जुन बिहीबारको वृहस्पतिमा चार दिन भन्दा माथि हुन्छ।
बगैचामा होटेल चिनजानो
बगैचाले होटलको उद्घोषणा गरे जुन केवल 2013 मा बनाइएको थियो जुन 130 वर्ष भन्दा बढि सुन्दर सुन्दर वन्य क्षेत्रको फाइदा लिन। गार्डन मा Hotel Chinzanso हजुरआमाको भित्री मूल अवशेषको घर हो, जस्तै हजार वर्षीय पागोडा र प्रतीकात्मक अशुद्ध पर्खालका पत्थर लालटेन। मैदानमा अर्को साइट प्राकृतिक, जंगली क्यामेरा फूलहरू जुन भरमा हेर्न सकिन्छ।
होटल एक ठूलो प्रतिष्ठा हो, 260 कोठा र फराकिलो रेस्टुरेन्टहरू फ्राफिक र इटालियन बिस्ट्रो, विश्व स्तरीय सुशी र राम्रो खाना खाने समावेश गर्दछ।
सार्वजनिक कला र वास्तुकलाको आनन्द लिनुहोस्
जापानको रचनात्मक प्रतिभा हरेक कुनाको वरिपरि स्पष्ट छ, र हरेक ठाउँमा स्क्वायर, जसले स्वतन्त्र सार्वजनिक कला देख्न र उनीहरूको अद्भुत वास्तुकलामा गवाही गर्ने एक आदर्श स्थान बनाउँछ।
मनपर्नेहरू बीचमा नक्षत्र, Pacifico योकोहामा कन्वेंशन सेन्टरमा। यो आइतओ हिरामाका चित्रहरु को एक दाग-कांच को मनोरंजन हो र तारा र नक्षत्रहरु को विशेषताहरु मामान, पौराणिक कथा द्वारा एक उत्कृष्ट कृति फ्रान्सेली कलाकार लुइस बुर्जोइस, रोप्पोङ हिल्स आंगनमा स्थित छ। मकवानपुर-जस्तै कामले दुवै पर्यटक र स्थानीयहरू दुवैको हितमा रुचि राख्दछ, किनकि यथार्थवादी कांस्य स्टेनलेस स्टील संरचना 30-फिट उच्च हुन्छ, र यसको पेटको 26 संगमरमर, यथार्थवादी लगाउने अण्डा भित्र छ!
Culinarians र foodies को लागि एक हृदयस्थल स्थान, सुजुजी बजार एक विशाल माछा र समुद्री खाना बजार हो जो हरेक वर्ष नयाँ समुद्री भोजन को 700,000 मीट्रिक टन भन्दा अधिक संभालती छ। विभिन्न प्रकारका विशाल किरायाहरू जस्तै सस्ता समुद्री तरकारीमा उच्च-अन्त क्यावियर र ताजा व्हेलको विवादास्पद कटौती जस्ता सरल किराया समावेश गरिएको छ, सबै जसमा सबै तहमा किन्नका लागि र स्थानीय टोकियो खानाको दृश्यमा दिग्गजका लागि खरीद गरिन्छ।
एक्सएनएसले एक्सएमएमक्सएक्समा उडान ल्याउने प्रविधि बिक्रीका लागि नीलामी-शैलीको बिक्रीमा एक्सएनमक्सममा खुल्यो भने तथ्याङ्क राम्रो भयो। टोकियो बाहिरको बजारको विचाराधीन चाल3को कम्तीमा सिजन सम्म विलम्ब भएको छ, त्यसैले यो तपाईंको पाक बाल्टी-सूचीमा छ भने समय बर्बाद नगर्नुहोस्!
ओडेबा रक्षात्मक प्रयोजनों को लागि 1850s मा निर्मित एक कृत्रिम द्वीप हो, तर त्यस पछि देखि यो खरीदारी, दृष्टि-देखिए र अवकाश को लागि एक क्षेत्र मा नामित गरिएको छ।
एक अद्भुत रात विस्टा, Odaiba हो टोकियोको हृदयसँग जोडिएको छ इंद्रधनुष ब्रिज द्वारा र एक प्रतिमा लिबर्टी प्रतिकृति र यस्तो आकर्षण समावेश गर्दछ Daikanransha, एक 377 फुट पैर फेरिस व्हील जुन टापुलाई अनदेखी गर्दछ।
टोकियो, अरू जहाँजस्तै, तपाईंको वालेट खाली गर्नु बिना हुन सक्छ। वास्तवमा, केहि हेर्नका लागि सबैभन्दा सुन्दर र मनोरञ्जन चीजहरू यसलाई खोल्न बिना अनुभव हुन सक्छ! जब तपाईं चीजहरू खोज्दै हुनुहुन्छ टोकियोमा केही दिनयीसँग सुरु गर्नुहोस्!
श्रेणी: एशिया, नि: शुल्क कुराहरू, जापान, यात्रा योजना टैग: माछा बजार, मुक्त, शाही महल, odaiba, टोकियो
← समीक्षा: Ibis लन्डन सिटी होटल - Shoreditch
5 मजा कुरा किट लाउडरडेलमा गर्न को लागी →
4 टिप्पणिहरु "7 नि: शुल्क कुराहरु टोक्यो मा गर्न को लागी"
तपाईले सबै कुरालाई कस्तो अनुशंसा गर्नुहुन्छ? दिनको सुरुवात? मेरो पति र म टोकियोमा भएको छैन तर हामी 2018 मा जाने योजनाहरु गरिरहेका छौं। हामी निश्चित गर्न चाहन्छौं कि हामीसँग सबै केहि हेर्नको लागि पर्याप्त समय छ कि हामी एक महिनाको लागि रहनेछौं! म स्थान हेर्नको लागि धेरै उत्साहित छु। सबैजना मलाई थाहा छ कसले भन्यो कि यो भीड हो तर राम्रो बाटोमा। मलाई थाहा छैन कि यसको मतलब छ तर म यो अनुभव गर्न चाहन्छु!
तपाईले राम्रो बिन्दु बनाउनुहुन्छ, र हो यो भीड छ। म दिनको अघि धेरै शहरी क्षेत्रको क्षेत्रलाई हेर्दै सिफारिस गर्नेछु, त्यसपछि सरसफाइमा जान्छु। यो कहाँ छ यी आकर्षणहरूको धेरै are छन्
अप्रिल 27, 2017
अद्भुत! साम्राज्य महल साँच्चै मेरो आँखा समात्न। मैले मेरो बाटो पछाडि टोकियो भ्रमण गर्न आशा गर्दछु। वा तपाईं मलाई अर्को अर्को यात्रामा साथ लिन सक्नुहुनेछ .. Lol। मलाई प्राकृतिक सौंदर्यशास्त्र धेरै मन पर्छ।
धन्यवाद, तपाईलाई लेख्नु भएकोमा खुसी लाग्यो!